Isikhwama sesikhwama se-yogathi sezingane esithandekayo Umkhiqizi Nomhlinzeki |Yingzhicai
Into Isikhwama seyogathi
Ukusetshenziswa Ifanele ijusi yeYogathi, ubisi, isiphuzo, iyogathi, ujeli, ijanpan, tofu, amanzi, ubisi lwesoya-bean, induku ka-ice-cream, ushukela, ect
Umumo: zonke izimo zingenziwa ngezifiso kumakhasimende
Umsebenzi wobuciko wokuphrinta ohlinzekwa ngamakhasimende noma oklanywe abaklami bethu
Ukuphrinta kwe-Gravure, kufika kumibala engu-10
I-Laminate I-laminate engenamanzi
Isampula Isampula yamahhala iyatholakala, impahla ekhokhwa ngamakhasimende, ehlinzekwe yizinsuku ezi-3-7
Ichweba lokulayisha I-Qingdao, China
Inkokhelo Idiphozi engu-50% nge-TT, ibhalansi engu-50% yi-TT ngaphambi kokulethwa
2.Lezi zidalwa zeresiphi ye-DIY Yogurt Pouch ziyindlela elula nejabulisayo yokwenza izikhwama zakho ezigcwele amaprotheni izingane eziqinisekile ukuthi zizozithanda!
3.Lezi zikhwama zeyogathi zilungele izinsuku zokudlala, amabhokisi esidlo sasemini, uhambo lomgwaqo, izinsuku zesikole, nokunye okwengeziwe - zilungele umama osendleleni ephakela izingane zakhe.
Isikhwama se-Yogurt Spout iphakethe lokudla elingcono kakhulu lezingane kanye nezingane.Ukupakishwa akuyona nje isisindo esilula futhi kulula, kodwa futhi kuphephile ukusetshenziswa kwezingane.
Isikhwama se-spout asina-BPA ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kokudla.Isikhwama se-spout esisebenza kahle kakhulu sokuvimbela singagcina umsoco wokudla.
Ukudla kulula ukukukhamela ngaphandle;I-anti-choke cap ingavimbela izingane ekugwinyeni ikepisi ngengozi.
Ukugeleza kokusebenza kokukhiqizwa kwangaphambili:
1. Sinikeze ulwazi oluningiliziwe mayelana nesikhwama ongathanda ukusenza, njengenjongo yokusebenzisa, usayizi, umsebenzi wobuciko, ukwakheka nokuqina, njll. Uma kudingekile, singakunikeza iziphakamiso zethu ezinhle nezichwepheshile ozikhethele zona.
2. Sizocaphuna ngokufanele ngemva kokuthola lonke ulwazi mayelana nesikhwama.
3. Uma intengo isiqinisekiswa izinhlangothi zombili, sizoqala ukusebenza ekucubunguleni umsebenzi wobuciko (FYI: sidinga ukucubungula umsebenzi wobuciko ube yinguqulo engenzekiyo yokuphrinta i-gravure).
4. Ukusetha izinga lombala.
5. Qinisekisa umsebenzi wobuciko bese usayina inkontileka.
6. Abathengi badinga ukukhokha kusengaphambili isilinda (izindleko zokuphrinta) kanye no-40% wenkokhelo ethuthukisiwe ye-oda.
7. Sizoqala ukukukhiqizela imikhiqizo ye-quanlity ngemuva kwalokho.
Okwedlule: Isikhwama se-peanut bagsauce
Olandelayo: isikhwama samanzi
isikhwama esikhethekile sejusi
isikhwama somumo webhodlela premake juice pouch
esukuma isikhwama sebhodlela
Isikhwama se-peanut bagsauce